Jabuuti oo heegan ku jirta, ciidamo dheeraad ahna u direysa Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa heegan sare gelisay ciidamadeeda amaanka, iyagoo taxadr uga jira weeraro Alshabaab ka geystaan dalkaas oo ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan.
Jabuuti oo horay Alshabaab qarax u geysteen ayaa iminka diyaar u ah iney Soomaaliya usoo dirto ciidamo dheeraad ah, waxeyna dedaal ugu jirtaa sidii ay uga hortegi laheyd aargoosi hor leh oo Alshabaab u geystaan.
Wasiirka arimaha dibada Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf oo saxaafada la hadlay ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada amaanka ay adkeynayaan amaanka dalkaasi kadib markii Alshabaab ay weerareen dalkaasi, si ay kaga hortagaan weeraro kale.
Dhanka kale dowlada Jabuuti ayaa sheegtay in meel gabo-gabo ah ay marayso qorshe ciidamo dheerad ah ay ugu soo dirto dalka Soomaaliya, si ay qeyb kaga qaataan howlgalka AMISOM.
Jabuuti ayaa ciidamo waxay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan kuwaasi oo qeyb ka ah howlgalka AMISOM ee ka socda dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 2007, markaasi oo ciidamadii ugu horeeyay ee AMISOM ay Soomaaliya yimaadeen.
Maxamed Cali Yuusuf wasiirka arimaha dibada ee Jabuuti ayaa sheegay in iminka ay qorsheynayaan 950 askari oo dheeraad ah ay u diri doonaan dalka Soomaaluya, gaar ahaan gobolada koofureed ee dalka Soomaaliya.
“Ciidamada iminka waa diyaar in loo diro Soomaaliya, wajiga koowaad 450 askari ayaan direynaa 500 ee harsanna labo bil kadib ayaan direynaa”ayuu yiri wasiirka arimaha dibada Jabuuti.
Sida uu sheegay wasiirka arimaha dibada go’aanka Jabuuti ay ugu soo direyso ciidamada dheeraadka dalka Soomaaliya ayuu ku sheegay inay tahay in Alshabaab ay ka saaraan gobolada ay kaga sugan yihiin Soomaaliya.